FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA DRAHTHAAR - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Drahthaar
Standard poodle St. bernard mix
Lehilahy manana alemaina alemà
Ny Deutsch Drahthaar dia alika antonony sy mihetsika tsara. Somary lava kokoa noho ny halavany ny vatana. Ny karandoha dia malalaka amin'ny fijanonana antonony. Ny molotra dia lava sy mahitsy mankamin'ny orona volontany mainty. Ny maso salantsalany, boribory boribory dia volontany, misy volomaso somary lava volomaso. Boribory ny sofina, mihantona akaikin'ny loha. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Matanjaka sy mahia ny hatoka. Lalina sy malalaka ny tratra. Matetika dia esorina ny lalàn'andriamanitra. Ny rambony avo lenta dia miorina amin'ny roa ampahadimin'ny halavany tany am-boalohany. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny rambon'ny dock amin'ny ankamaroan'ny faritra Eropa. Ny palitao dia manana akanjo lava izay matevina amin'ny ririnina ary manify amin'ny fahavaratra. Ny palitao ivelany, mahatohitra rano, mpanala rano, dia mahitsy, mandry ary masiaka mirefy 5,8 cm ny halavany. Ny volo eo amin'ny volombava, ny handrina ary ny volombava dia lava kokoa hiarovana ny tarehy. Ny lokon'ny palitao dia atiny sy fotsy, na misy fikitihana, mandro na misy pentina ary indraindray atiny mafy. Aty ny loha, misy na tsy misy fipoahana fotsy ary ati-doha ny sofina.
Ny Deutsch Drahthaar dia mavitrika sy manan-tsaina tokoa. Vonona ny hianatra sy tsy hivadika amin'ny fianakaviany izy, mila mpikirakira izay mifanaraka amin'ny fomba fiasa izy io. Ny Drahthaar dia te-hozazaina ary mankafy miasa amin'ny tompony. Sariaka amin'ireo olona fantany izy io, nefa mety ho lavitra olona tsy fantatra sy tokony ho izy mifanerasera, indrindra amin'ny mbola kely . Raha mahatsapa ny tompony dia malemy fanahy na mandefitra ho lasa fanahy iniana io. Ny fakana fihazana azy no mitaona azy hirenireny. Mahefa sy matanjaka, afaka manao Drahthaar lasa mankaleo ary sarotra tantanana raha tsy fanatanjahan-tena ampy . Ny Deutsch Drahthaar dia tsara manodidina gundog afaka mihaza karazana lalao amin'ny karazana tanety. Manana orona tsara ity alika ity ary afaka manara-maso, manondro ary mamerina amin'ny tany sy rano. Izy io dia miorina, velona ary mahery. Tokony hampianarina hampiseho ny ankizy fahaiza-mitarika mety . Raha tsy mahita ity alika ity olombelona toa azy amboniny amin'ny filaharan'ny pecking no hahatongavany manjakazaka ary manery ary mety manandrana manjakazaka biby hafa. Amin'ny alàlan'ny fitarihana mety dia hifanaraka tsara amin'ny alika hafa sy ny biby an-trano. Drahthaars manao fanaraha-maso tsara.
Haavony: Lehilahy 24 - 26 santimetatra (60 - 67 cm) Vehivavy 22 - 24 santimetatra (56 - 62 cm)
Milanja: 60 - 70 pounds (27 - 32 kg)
Ny tsipika sasany dia mora voan'ny plastika, aretin-tsofina, areti-maso ary hoditra kansera .
Ny Deutsch Drahthaar dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Mety ho somary avo lenta izy io ary tena mila miasa ao an-trano mila fanatanjahan-tena be loatra mba hisorohana ny tsy fandriam-pahalemana tafahoatra ao anaty. Hahomby indrindra amin'ny tokotany lehibe farafaharatsiny.
Io alika io dia mahery sy matanjaka be. Zava-dehibe tokoa ny fanazaran-tena matanjaka isan'andro mba hisorohana azy tsy ho voarohirohy amin'ny fikorontanana anaty be. Ity karazana ity dia mety ho fanamby ho an'ny fianakaviana mavitrika indrindra ary tsy tokony horaisina ho toy ny biby fiompy ao an-trano izy ireo, raha tsy hoe afaka miantoka fanazaran-tena matanjaka isan'andro izy ireo. Ny karazany dia mahomby indrindra rehefa miasa, fa raha tsy azo atao izany dia mila entina isan'andro, haingana, mandeha lavitra , mihazakazaka na mihazakazaka eo akaikinao rehefa mandeha bisikileta ianao. Mpiara-milalao jogging tena tsara izy ireo ary tia milomano sy misintona. Rehefa mandeha an-tongotra na mihazakazaka ianao dia aza hadino ny mametaka ny alika eo ambadiky ny olona mitazona ny loha, fa tsy eo alohany mihitsy, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia mila ny olombelona.
12-14 taona eo ho eo.
Ny palitaon'ny Deutsch Drahthaar dia tokony hosasana tokony ho roa isan-kerinandro amin'ny borosy mafy. Mila fandroahana ny palitao, saingy sarotra ny mianatra manao azy. Ny volony dia tokony hotsoahina tànana indraindray arakaraka ny toetran'ny palitao. Matetika izy io dia mahia amin'ny lohataona sy amin'ny fararano. Mandroa raha tsy ilaina. Ny volon'ny palitao dia tokony ho mafy araka izay azo atao, fa tsy tokony ho tsy milamina. Zahao ny sofina hahamarika fa madio izy ireo. Ny tongotra dia tokony hojerena aorian'ny alika niasa. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Deutsch Drahthaar dia novolavolaina tany Alemana tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 tamin'ny fiampitana ny Pointer Shorthair Alemanina miaraka amin'ny Griffon, Stichelhaar (alika iray izay novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fiampitana ny Pointer, Foxhound, Pudelpointer, ary alika rano poloney) ary ny Pudelpointer (alika iray izay lakroa teo anelanelan'ny Poodle sy Pointer). ny Pointer alemana Wirehaired avy amin'ny Deutsch Drathaar. Ny fisarahana dia nitranga rehefa nafarana tany Etazonia izy ireo tamin'ny voalohan'ny taona 50. Tamin'izany fotoana izany dia nanantena ireo mpiompy amerikana fa ny famerana ny lalàna mifehy ny Verein Deutsch Drahthaar (VDD) dia ny Alemanam-piadiana Alemanina izay mifehy ny karazany manerantany ho voafetra. Na dia afaka miteraka alika aza izy ireo, dia tsy azo voasoratra anarana ka tsy afaka mivarotra azy ireo toy ny alika madiodio na alika voasoratra anarana. Niasa tamin'ny alàlan'ny klioban'ny kennel amerikana izy ireo mba hampidirina ny karazany ho an'ny tanjona mba hahafahana manoratra ny alikany. Ohatra, Deutsch Drathaar's mbola tsy azo ambolena any Angletera. Izay fako nateraky ny mpivady Deutsch Drathaar any Angletera dia azo voasoratra anarana amin'ny klioban-dry zareo, na izany aza tsy hosoratana amin'ny VDD. Ny tena maha samy hafa ny Deutsch Drahthaar sy ny German Wirehaired Pointer dia ny Deutsch Drahthaar dia mbola namboarina hatrany amin'ireo fenitra napetraka 100 taona mahery lasa izay rehefa tapa-kevitra ireo mpiompy alemanina fa namboly ilay alika mpihaza mahay indrindra manodidina. Ny fandaharam-piterahana sy ny fepetra takiana amin'ny fandraisana anjara dia nanampy tamin'ny fiantohana ny tsy fahatomombanana ara-pirazanana naverina naverina tany amin'ny karazany ary hitazomana ny toetra nampivoarana ny karazany. Ny GWP dia manana fari-pitsipika manokana misy ny fifantohana betsaka eo amin'ny peratra fampisehoana ary tsy dia kely amin'ny filana / fiara voajanahary amin'ny fikatsahana lalao. Deutsch Drahthaar dia afaka manondro, manara-maso, mamerina ary miasa toy ny gundog, na an-tsaha na amin'ny rano ho an'ny volom-borona sy volom-borona.
Alika basy, fihazana
NAVHDA = Fikambanan'ny alika mpihaza amerikana avaratra
VDD = Fikambanan'ny Pointer Wirehaired Alemanina
VDD / GNA = Fikambanan'ny Deutsch-Drahthaar, Vondrona Amerika Avaratra
Griffin vom Elchertz the Deutsch Drahthaar amin'ny faha-5 taonany
Alika mpanondro: sary an-tsokosoko voaangona
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Schweenie
Fampahalalana sy sary miteraka alika amin'ny alika
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Weiler Dane
Alika miteraka A ka hatramin'ny Z, - Ireo karazana manomboka amin'ny litera A
Lisitry ny alika mitambatra Norfolk Terrier mifangaro
Fampahalalana momba ny fiompiana alika Bulldogge italiana sy sary
Fampahalalana momba ny fiompiana alika Yorkshire Terrier Australia
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Yorkipoo
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana omby amerikana omby
alikakely teraka miaraka amin'ny molotra moka
afaka miteraka alika an-trano ny coyotes
mpiandry aostraliana mifangaro amin'ny collie border
bulldog frantsay fotsy sy brindle
ny fomba hiatrehana ny fametrahana alika